Hadaad Bikro aheyn waxaa laguu hayaa qaab aad ninka u qiyani karto? | shumis.net
Home » galmada » Hadaad Bikro aheyn waxaa laguu hayaa qaab aad ninka u qiyani karto?
Hadaad Bikro aheyn waxaa laguu hayaa qaab aad ninka u qiyani karto?
Guurku waa heshiis ku dhisan kalsooni iyo is aaminid labada dhan ka yimid, hadii mid ka midda labada lamaane shaki galana waxaa dhaca in shakigaa sababo in la kala aamin baxo gurigii la dhisayna halkaa ku burburo.
Title: Hadaad Bikro aheyn waxaa laguu hayaa qaab aad ninka u qiyani karto?